घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » कोस्टा रिका ताजा खबर » किन सबै कोस्टा रिक्सनहरू विकल्पका आधारमा नागरिकहरू हुन्?
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • क्यारिबियन • कोस्टा रिका ताजा खबर • एल साल्भाडोर ब्रेकिंग न्यूज • सरकारी समाचार • ग्वाटेमाला ब्रेकिंग न्यूज • होन्डुरस ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • निकारागुआ ताजा समाचार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
निकारागुआ, कोस्टा रिका सबैले आजको गुआनाकास्ट दिवसको इतिहास साझेदारी गर्दछन्, कोस्टा रिकामा आगन्तुकहरू र स्थानीयहरूको लागि मनपर्ने।
केन्द्रीय अमेरिकी संघीय गणतन्त्र गुवानाकास्ट दिवस मनाउँछ
मेक्सिकोको स्वतन्त्रता युद्धपछि मध्य अमेरिकामा स्पेनी शासनको अन्त १ 1812१२ मा भयो। १ 1824२XNUMX मा, कोस्टा रिका यसका अंश थिए संघीय गणतन्त्र मध्य अमेरिका, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, र निकारागुआ जस्ता अन्य राज्यहरूको साथ।
ग्वानाकास्ट डे कोस्टा रिकामा सार्वजनिक छुट्टी हो, जुन २ 25 जुलाईमा मनाइन्छ। COVID-१ p महामारी पछि पर्यटन क्षेत्रलाई कायाकल्प गर्ने लक्ष्यमा यो छुट्टी २०२२ देखि निम्न सोमबारमा सारिनेछ।
'निकोया डेको एनेक्सेशन' (ला एनेक्सियन डेल पार्तिदो डे निकोया) को रूपमा पनि चिनिन्छ, यो दिन १ 1824२XNUMX मा गुवानास्टेको कब्जाको रूपमा चिनिन्छ जब प्रान्त कोस्टा रिकाको हिस्सा भयो।
गुआनाकास्टको क्षेत्र निकारागुआको अंश थियो र कोस्टा रिकाको उत्तरी भागमा यसको सीमा छ। ग्वानाकास्टका तीन प्रमुख शहरहरूमा निकारागुआदेखि कोस्टा रिकामा स्विच गर्नेबारे छलफल भएको थियो। के गर्ने भनेर निर्णय गर्न जनमत संग्रह बोलाइएको थियो। जनमत संग्रहमा, निकोया र सान्ता क्रुजले कोस्टा रिकामा सामेल हुन हो मतदान गरे, जबकि लाइबेरियाले निकारागुआमा रहन भोट गरे। समग्र नतिजा कोस्टा रिकाले कब्जा गरेको पक्षमा थियो।
केन्द्रीय अमेरिकी संघीय गणतन्त्रले यस कानूनलाई विधिवत पारित गरी जुलाई २ 25, १ 1824२ signed मा हस्ताक्षर गर्यो, जसले ग्वानाकास्ट प्रान्त कोस्टा रिकन क्षेत्रको हिस्सा बन्न अनुमति दियो।
हरेक वर्ष, जुलाई २ 25, एक आगन्तुकले केहि देख्नेछन् विभिन्न हुँदैछ। स्कूलका बच्चाहरू स्कूलमा छैनन्। बैंकहरू, सरकारी कार्यालयहरू, र अन्य व्यवसाय स्थानहरू बन्द छन्। व्यक्ति - र विशेष गरी साना बच्चाहरू - पहिरिएका छन् विशिष्ट पोशाक (सामान्य पोशाक, सामान्यत: रातो, सेतो र नीलो प्रकारको)।
रहस्य, समाधान: आज "ग्वानाकास्ट दिवस" ​​वा अधिक औपचारिक रूपमा, "ला अनेक्सियन डेल पार्तिदो डे निकोया" (""गुआनाकास्टको एनेक्सेशन")।
तामारिन्डोमा यस चाड विशेष गरी भव्य हुन्छ, किनकि हामी गुयनाकास्ट प्रान्तमा छौं - दिन उत्सवको केन्द्र। त्यो भनियो, ग्वानाकास्ट डे कोस्टा रिकामा प्रमुख चाड हो, र केवल ग्वानाकास्टमा मात्र होइन: आज सबै सात प्रान्तहरूमा औपचारिक छुट्टी हो। आज त्यो दिनको सम्मान गर्दछ जुन हाम्रो प्रायद्वीप - अब प्रान्त - कोस्टा रिकाको अंश बन्न गयो। आजको दिन उत्सवको लागि हो।
यो सबै शताब्दीअगाडि सुरु भयो ...
आजको सुरुवात आज होइन तर धेरै वर्ष अघि - शताब्दीयौं अघि, वास्तवमा जब स्पेनले पहिलो पल्ट यो क्षेत्र बसालेको थियो अब हामी मध्य अमेरिकाको रूपमा चिनिन्छौं। १ 1500०० को दशक (उपनिवेश) र १s०० को शुरुवात (स्वतन्त्रता) बीच, मध्य अमेरिका धेरै स्पेनी प्रान्तहरु मिलेर बनेको थियो। त्यस्ता दुई प्रान्तहरू: कोस्टा रिकाको प्रान्त र निकारागुआको प्रान्त।
यस अवधिमा, पार्तिदो डे निकोया - आजको क्षेत्र, कोस्टा रिकाको गुआनाकास्ट प्रान्तको लगभग सम्पूर्णता समाहित छ - जग कोस्टा रिका र निकारागुआ दुबै प्रान्तहरुमा निष्ठा। यो खेल राजनीतिक स्वायत्ततामा पनि पक्कै चल्छ - अवश्य पनि, स्पेनको मध्य अमेरिकी राजधानी ग्वाटेमालामा अन्तिम निष्ठाको साथ।
तीन शताब्दीहरूमा, पार्तिदो डे निकोया कोस्टा रिका प्रान्तसँग आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गरेको थियो। त्यसोभए, १1812१२ मा, जब स्पेनले प्रान्तीय प्रतिनिधिहरूलाई कोर्टेस डे काडिज (क्याडिज कोर्ट्स) का लागि बोलाए, निकोयाले कोस्टा रिकन फेडरेशनमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरे। एक आधिकारिक गठबन्धन को जन्म भएको थियो।
एक दशक भन्दा कम पछि, १ 1821२१ मा, मध्य अमेरिका भयो स्पेनबाट स्वतन्त्र। सन्‌ १1824२XNUMX सम्ममा मध्य अमेरिकाले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र गठन गरिसकेको थियो रिपब्लिका फेडरल डि सेन्ट्रोमेरिका, अन्यथा मध्य अमेरिका को संघीय गणतन्त्र को रूप मा परिचित।
गुआनाकास्ट: स्वतन्त्र विकल्प
यो पार्तिदो डे निकोया एउटा निर्णायक मोडमा थियोः के तिनीहरू मध्य अमेरिकाको संघीय गणतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रान्त निकारागुआको भागको रूपमा, वा कोस्टा रिकाको स्वतन्त्र प्रान्तको भागको रूपमा सहभागी हुनेछन्?
त्यतिबेला निकारागुआलाई हिंसा र राजनैतिक कलहको सामना गर्नु परेको थियो। अर्कोतिर, कोस्टा रिका बढी शान्त थियो। थप रूपमा, कोस्टा रिका र वाणिज्यिक सम्बन्धहरू खेल अझै पक्का थिए (र बलियो हुँदै गयो)।
तर पक्कै पनि, कुरा त्यति स्पष्ट कुरा थिएन: त्यहाँ दुबै स्वतन्त्र प्रदेशहरुका लागि राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध थियो। त्यसोभए, जब कोस्टा रिकाले भू-राजनीतिक निमन्त्रणा विस्तार गर्‍यो पार्तिदो डे निकोया, निकोयाले मतदानको लागि बोलाए.
निकोयाका तीन ठूला शहरहरू - भिला डे गुआनाकास्ट (अहिले लाइबेरिया), निकोया र सान्ता क्रुज - १ 1824२XNUMX मा सम्भावनाहरूबारे छलफल गर्दै केही महिना बिताए। अन्त्यमा, निकोया र सान्ता क्रुजले हो मतदान गरे: The पार्तिदो डे निकोया कोस्टा रिकामा एनेक्स हुन्छ।
मिति थियो जुलाई 25, 1824.
आज, कोस्टा रिकाले शान्ति र प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ
त्यसैले आज र हरेक जुलाई २ 25, कोस्टा रिकामा हामी एक क्षेत्रको चाड मनाउँछौं शान्तिमय (र प्रजातान्त्रिक) निर्णय हाम्रो शान्तिमय (र प्रजातान्त्रिक) राष्ट्रमा सम्मिलित हुन।
यो यस्तो भावना हो जुन तपाईं जहिले पनि सुन्नुहुनेछ र प्राय:डे ला पत्रिया पोर न्यूस्ट्रा भोलन्ट्याड ” - "रोजाइले कोस्टा रिकन।" हामी कोस्टा रिकन हौं किनकि हामीले त्यस्तै छनौट गरेका छौं, र हामी छनौटको लागि खुसी छौं। र यसैले, आज तपाईले धेरै कुरा सुन्नुहुनेछ संगीत, केहि हेर्नुहोस् फायरवर्क, र केहिमा तपाईंको खुट्टा ट्याप गर्नुहोस् परम्परागत लोक नृत्य। यदि तपाई भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईले समात्न सक्नुहुन्छ परेड.
र जब तपाईं यसमा हुनुहुन्छ, एक हात-पामले पक्रन नबिर्सनुहोस् tortilla र एक गिलास इम्रीको जुस। तिनीहरू गर्व गुआनाकास्ट परम्परा हुन्!